Global Voices teny Malagasy » Japàna : Fananahana, Miralenta ary Fanonerana · Global Voices teny Malagasy » Print
Japàna : Fananahana, Miralenta ary Fanonerana
Voadika ny 06 Septambra 2018 4:52 GMT 1	 · Mpanoratra Tomomi Sasaki Nandika (fr) i Fabienne Flessel, miora
Sokajy: Japana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)
Namoahan'ny Tribonalin'ny Distrikan'i Okayama didy  [amin'ny teny Japoney] ny momba ny fikajiana ny fanonerana vinavinaina omena ireo nanova fananahana, izay miaina miaraka amin'ny fahasembanana goavana taorianà lozam-pifamoivoizana, kajiana miainga avy amin'ny karama salantsalany raisin'ny lehilahy lehibe iray. Vehivavy no niraketana ilay mpangataka tao koseki , Sora-piankohonana, izay nanosika ny voampanga hitaky ireo fanonerana mba hokajiana mifanaraka amin'ny karama salantsalany raisin'ny vehivavy lehibe iray. Ny nitondràn'ilay mpitaky anaran-dehilahy mahazatra no fototra niaingàn'ny mpitsara ary noho izy mampihatra tsy tapaka ny ftsindronana testosterona.
Mampanontany tena an'i Aoisora002  ny ho fanehoankevitra aorian'ny nandraisana io fanapahankevitra io :
Azo ambara ho fanapahankevitra manantantara izy io noho izy manome lanja betsaka ny fiainana andavanandro, fa tsy izay voasoratra ao anaty sora-piankohonana. Rehefa saininao tsara ny momba azy io, dia toa mibaribary izany. Raha toa izy miaina sy karamaina toy ny lehilahy, lojika raha toa ka omena fanonerana mifanaraka amin'ny tokony ho azon'ny lehilahy. Toa manaraka tsara ny lalantsaina io fanapahankevitra io raha jerena ety amboalohany, saingy manontany tena aho, na izany aza, sao ho lasa ‘jurisprudence’ ilay izy any aoriana.
Ao amin'ny bilaoginy, mandika io vaovao io ao anatin'ny tontolon'ny fitsaratsarana an-tendrony [Jap] i Dorami  :
Zavapady ao Japàna ny raharaha mifandray amin'ny maha-ianao anao ara-pananahana na ny mifamatotra amin'ny miralenta  ary mbola mijanona hatrany ho tsiambaratelo, na izany eny anaty media na any anaty fanabeazana (izay indrindra, misy fahasamihafana ny maha-ianao anao ara-pananahana sy ny maha-ianao anao manoloana ny miralenta.) Ohatra, heverin'ny olona fa tsy azo ekena ny fanambadian'ny olona mitovy taovam-pananahana (mba tsy hilazàny hoe ratsy), kanefa, tsy hilaza mazava mihitsy ry zareo hoe ratsy io, tontolo iray manome vàhana ny fitsaratsaràna an-tendrony io. Angamba ho an'ny fiarahamonina Japoney, tokony hifaliana ny hoe tao anatin'ny 2 na 3 taona, manomboka hita eny anaty seho anaty fahitalavitra ireo lehilahy pelaka. Raha mbola tena manjaka any anatin'ny faritra sasany ao Etazonia ny fitsaratsaràna an-tendrony ara-poko, mba efa nahitàna fihatsaràny koa aloha ny toedraharaha, tamin'ny nahafahan'ny Mainty hoditra iray ho lasa filoha. Tsy tokony hahagaga raha olona iray pelaka ny manaraka. Tsy tokony ho gaga raha toa i Japàna hanaraka izay làlana izay, mihevitra aho na eo aza izany rehetra izany hoe ny kisary politika ao amin'ilay firenena no mety ho sakana henjana be.
Mamaly fanehoankevitra iray tao amin'ilay lahatsoratra i Hino :
Heveriko fa tsy ny mifanohitra amin'izay mihitsy no hiseho, vehivavy iray nanova fananahana mety hangataka fanonerana mifanaraka amin'ny fiainana maha-vehivavy azy. Amin'izay, azo atao ny miresaka fitoviana tanteraka.
Ao amin'ny bilaoginy, Kyoko  [Jap] dia manamarika koa ireo fironana vaovaon'ny haino aman-jery  [angl] :
Ny teny hoe 性同一性障害 izay midika hoe “fikorontanan'ny lenta” dia lasa mahazatra ao Japàna. Miaraka amin'ny fipoahan'ireo “onee” (‘Onee’ midika hoe zokivavy lehibe saingy manondro ihany koa lehilahy iray nanova taovampananahana ho lasa vavivavy), afaka mahia lehilahy pelaka marobe eny anaty fandaharana anaty fahitalavitra isika. Kanefa, tsy heveriko ho tena maneho ny zavamisy izy ireny…
Tsy azo ekena mihitsy hoe miaritra hirifiry izy taty aoriana, fa heveriko hoe ireharehany ny aminy sy ny fomba naneken'ny fiarahamonina azy ho toy ny lehilahy.
Ao anaty lahatsoratra iray nomena lohateny hoe “Ny lanjan'ny aina/fiainana “, ametrahan'i Hiro fanontaniana ny tena fototr'ilay rafitra :
Rehefa fintinina, raha toa ny fikajiana ka nifototra tamin'ny karama salantsalany raisin'ny vehivavy iray, dia tena ho ambanimbany ny fanonerana raisiny. Na ohatra aza ny olana eo ambanin'io dia ny hoe tsy mahazo ny karama sahaza azy ny vehivavy raha miohatra amin'ireo lehilahy, dia ampahatsiahivin'ity raharaha ity hoe zavadehibe ny mandray fanapahankevitra miainga avy amin'ny tena zavamisy fa tsy ny lalàna. Ohatra, raha dokotera na mpisolovava io lehilahy io, ho tsaratsara kokoa ny fanonerana raisiny. Raha NEET  na freeter  izy (samy fomba fiteny anondroan'ny anglisy ireo karazana tanora anatin'ny tsy fananany asa na fidonanam-poana), mety ho kely kokoa no raisiny. Atahorana ny fiarahamonina iray mandray fanapahankevitra momba ny lanjan'ny aina/fiainana tahaka izany miainga avy amin'io karazana tsy fitoviana io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/06/125706/
 Namoahan'ny Tribonalin'ny Distrikan'i Okayama didy: http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090204-OYT1T00445.htm
 fironana vaovaon'ny haino aman-jery: http://www.cscoutjapan.com/en/index.php/battery-powered-dondake-signals-its-imminent-demise/
 “Ny lanjan'ny aina/fiainana: http://fujiism.se.aichi-edu.ac.jp/blog/?p=808